Gawaarida ayaa u duulay Metrobus stop | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulGaadiidka ayaa u duulay joojinta metrobus
12 / 04 / 2015 34 Istanbul, tareenka, GUUD, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Metrobus, TURKEY
Gaarigu wuxuu u duulay joogsigii metrobus: 4 qof ayaa dhaawac fudud ku gaarey gaariga halkaas oo barxadda leexashada ay ku dhegtay fallaarta. Qofka 5 qof ayaa waxoogaa ku dhaawacmay gaadhiga, halkaas oo barxadda leexintu ay ku dhegan tahay fallaarta, oo qofna joogsan joogsiga inta shilku dhacay.
Shilku wuxuu ka dhacay Merter Metrobus Stop ee jihada E-02.30 Highway Ankara waqtiga safka 5. Si la mid ah, jihada Bakirkoy Topkapi 34 HZ 4512 taarikada gawaarida nalka fudud ee hoos imaanaysa maamulka Seçkin Pişkin, sababtoo ah xawaaraha xad dhaafka ah ee darawalka wuxuu lumiyay gacan ku haynta isteerinka madaama metrobus ay wadada soo galeen. Ka qaadista gaariga adoo ku tuuraya xoogaga wadada aagga metrobus oo qiyaastii ah 200 mitir Merter Metrobus joogsashada adigoo dhinaca dhinac u weecinaya dhinacyada. Tuubbo bir ah oo gudaha gaariga dhex galeysa ayaa loo xardhay sidii fallaadha. Shilka gaariga Seçkin Pişkin, Ercan Birişik (29), Yavuz Arslan iyo qof magaciisa aan la baran karin, ayaa xoogaa dhaawac ah. Ugu horreyn, darawalada ku xeeran ayaa u orday gargaarka kuwa dhaawacmay. Markaas muwaadiniinta, booliska, shaqaalaha dabdemiska iyo dab damiska ayaa ka warbixiyay xaaladda. Ogaysiiska kooxaha caafimaad ee goobta jooga, iyagoo caawimaad ka helaya muwaadiniinta iyagoo ka saaraya ambalaaska dhaawacyada ayaa laga soo qaaday gaariga. Arslan iyo darawalka ayaa loo qaaday Isbitaalka Tababarka iyo Cilmi baarista ee Istanbul, Jaamacadda Birisik Istanbul, Isbitaalka Kuliyadda Caafimaadka ee Istanbul. Qofka aan magaciisa baran karin ayaa loo qaaday isbitaal u dhaw oo la daweeyay.
XAALADAHA FARSAMADA EE AQOONKA
Dableyda goobta ka shaqeysa ayaa marka hore baaray qeybta mashiinka gaariga si looga fogaado xaalad xun. Khamrada khamriga ee aalkolada leh ee gaariga gudeheeda ayaa soo jiidatay dareenka. Daraasadda ka dib, gaadhiga, dab-damiska iyo kooxaha dawlada hoose ayaa ku soo noqday guriga iyagoo gacan ka helaya hamma ka dib markii laga saaray goobta iyadoo gacan ka heysata halbeega.
TILMAAMAHA LAGU SAMEEYAY
Goobaha waaweyn ee loo yaqaan 'Metrobus-ka' ayaa lagu dhuftay gaari ganacsi oo fudud kadib markii la daadiyay. In kasta oo daaqadaha ku xeeran dhismaha ay cusbo iyo baraf yihiin, nadaafadda iyo howlaha dayactirka waxaa lagu sameeyay xarunta ay waxyeelladu ka soo gaartay kooxaha Isku-xirka Dayactirka iyo Hagaajinta Waddooyinka ee Magaalada Istanbul. Kadib shaqadii waxaa laga saaray kooxihii laga saaray dekedihii iyo deyrarkii silig. Muwaadiniinta qaar ee arkay shilka iyagoo istaagay gawaarida ayaa isku dayay inay sawirka ka qaadaan goobta.
LAGU SAMEEYAY FACIAD
Natiijada shilku wuxuu dhacay habeenki, albaabka ayaa loo celiyay musiibo suuragal ah. Koontaroolka gaadhiga ayaa si dhakhso ah u soo gashay joogsiga metrobus, iyada oo fursad, cidina laga baran in sugitaanka joogsiga. Markhaati Suleyman Tanriverdi oo ah muwaaddinka dhacdada, “Waxaan ka imid xad-dhaaf. Si lama filaan ah waxaan arkay gaariga oo rogroganaya 3-4. Haddii qof aan dhiman uusan dhiman, yuusan nasanayaa oo tukadaa.
Jihada Avcılar-Söğütlüçeşme sababtoo ah shilka ayaa u xirnaa gaariga in muddo ah, kooxo boolis ah ayaa bilaabay baaritaan ku saabsan shilka.
Metrobus Joojinta Cusub ee Mambobus
Mecidiyekoy ayaa joojiyay joojinta
Cevizlimuwaadiniinta ayaa la kulmay rabshado ku yaal saldhigga metrobus
CevizliSaldhigga dhexe ee metrobus ee beerta beertu wuxuu keenayaa dhibaato!
Taageerada Dumarka ayaa abuuray calaamadda jimicsiga ee Zincirlikuyu
Metrobüs ee istaagida meesha joogsiga ugu dambeysa
Tareenka dib-u-soo-celinta ee Moscow